Taariikhda My Butros » Waxa aad xiranayso On Date A First By Aayad Burji
Marka aad shukaansi ugu horeeyay, waxa ugu horeeya ee laga yaabaa inaad ka fakarto sida ugu dhaqsaha badan aad u xaqiijistay waa, "Maxaan inay xirtaan?!"Ama ugu yaraan, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee aad ka fakarto. Waxaad doonayaa in aan noqdo raaxo leh in welwelina waxaad u huwan, laakiin waxa kale oo aad rabto in aad u hubiso in aadan ku xumayso qofka aad ku socoto baxay, iyo si ay ugu helaan aad soo jiidasho. Raadi ay Burji hoose oo saxeex iyo aad u hesho fikrado ah ee waxa aad xiran karaan in ay sii wadayaan indhahoodu aad on at times dhan.
Taariikhda Aries waa fieriest ka mid ah Calaamooyinkiisa dabka, taas oo ka dhigaysa si fiican u jawaabaan casaan midabka. In badan oo dhalaalaya oo firfircoon Cas, si fiican u. Waxay rabaan in ay aad u aragto jidhkaaga, si aad xidhato dhar ka hadlaysaa qeybaha ugu fiican ee jirkaaga. Haddii aad leedahay hay'ad ka weyn, tago ee dharka tightest aad qabto. Waxay aad rabto super kulul.
Taariikhdaada Taurus waa calaamad dhulka wax ku ool ah, si ay u muuqdaan in ay door bidaan labbiska dhaqameed. Soo qaado hal aag oo ah maqaarka si ay u muujiyaan, iyo sii inteeda kale daboolay. Sminke waa in dabiiciga ah-raadinta, iyo dahabka waa in ay ka buuxaan dhagxaan qurux badan. Calaamad Tani si fiican ay jawaab u yahay Midabkeedu, kaas oo caadi ah ee dabiiciga ah, midabo dhulka sida cagaarka la qariyaa ama buni. In badan oo aad soo gaarto sida an ilaah dhulka / ilaahadda, si fiican u.
Taariikhda Gemini waa cayaar ah iyo madadaalo, sidaas dharka ee wax cute iyo wax yar rayn ah. Sida calaamad hawada ah, ay jecel yihiin inuu la socdo waxa ka jira iyo waxa aan la. Waxay yeelan karaan shakhsiyad u eg ilmo, si ay u nabdoonaataan in ay wax ka jawaabin in Waano ahaanshaha kids / dhallinyarada, sida loo xayday plaid iyo jaakadaha varsity. Isku day inaad xirto dhalaalaya, midabo xiiso in kicin maskaxdooda.
Taariikhda Cancer Your waxay calaamad u tahay raaxada, sidaa darteed uma baahnid inaad u labistaan ​​ilaa in wax qabanaya, xidho cidhib aad u dheer, ama saaray kulankii ah haddii aad sii doonaa kuurkuursi waxaa la. Haddii aad tahay guurkooda, in waxa aad gashan, in iman doonaa guud ahaan iyaga. Isku day inaad ka fogaato midabbada dhalaalaya ama wax kasta oo duurjoog ah oo halkaas ka baxsan oo cabsi gelin kara.
Taariikhda Your Leo doonayo si ay u dareemaan sida ay taariikhda ugu kulul ee qolka, qof kasta oo ka mid ah waxay leedahay ay isha ku, sidaas darteed waa glam ilaa. Waxay kaa rabaan inaad u ekaato bilic qurux badan intii karaankaaga ah. Xitaa Waxaad noqon kartaa mid cirifka tacky / gaudy. Lakabka on dahabka ah – laabto ka badan, si fiican u. Waxay jecel yihiin red maxaa yeelay waxa ay soo jiidataa dareenka, iyo dahab, iyo guduud, tan iyo markii ay tahay midabada qoyska boqortooyada.
Taariikhda Your Virgo ma daryeeli badan oo ku saabsan dharka naqshadeeye ama shandadaha ama wax ka mid ah in. Iyagu waa walaaca ugu weyni waa inaad ur fiican leedahay, si cad u qaatay Roob hore, oo aan gashanayn hairspray aad u badan, qurxiyo, ama u eg lucbad. Nadaafadda waa tiro ka mid calaamad this. Hayso fudud ka dhisan aad, cayishay,, oo ku dhegeen midabo kala dhex-dhexaad ah. Waxay si fudud u taag darnaataa tahay, si midabyo walaac ayaga u.
Taariikhda Your Showgii waa ugu moodada dhammaan calaamadaha Burji, si aad u leeyihiin in ay u bilaaban uruursanayey ah. Soo jiid kuwa dharka naqshadeeye iyo wada saaray qabow ah, fiirin Casrisan. Calaamaddan xeerarka farshaxanka, taas oo ah sababta ay tahay si moodada, oo ay filayaan in aad si wadajir ah waxayna iminka u eeg. Waxay jecel yihiin codadka jawharad, accessories, iyo dahabka qurux badan, laakiin aan aad u badan waxaa ka mid ah.
Taariikhda Scorpio waa calaamadii in xeerarka mugdi ah, sidaas u tagto midabka madow. Haddii aad kabixi kartaa off madaxa-ilaa lugo madow, tag, waayo,. Waxay jecel yihiin inaad daboolan laakiin in dharka ku giijisan oo iyaga ku xusuusinayaa addoonsiga (calaamadaasuna leedahay arrimaha control). Tag il a qaaca, idinkoo xusuusanaya in intii indhaha yihiin furmo si ay nafta iyo waxa ay doonayaan in ay kuwa iskufilka idinkaa iska galay damci.
Your xayawaanka Sagittarius ma aha sida caadiga ah in geli xarago iyo dharka, laakiin ay aad rabtid in aad eegto wanaagsan. Waxay jecel yihiin midabyo iyo jeclahay dharka ama dahabka ah in uu leeyahay sheeko in ay. Haddii aad ku heshay halka safraya, ama u soo galay aad hantida u marayo xaalad qaar la yaab leh, waxaa tuura on hana noqdo il wada hadalka xiiso leh. Waxay ku dhamaan doonaa ilaa helo * aad * xiiso leh.
Taariikhda Capricorn waa kuwa ugu dhaqanka ee dhammaan calaamadaha Burji, sidaa ku dhegeen dhisan dhaqanka. Ladies, jiid aad LBD; mishinka, qabsoomayn suud iyo xerin. Ka dheerow midabyo, oo ku dhegeen waana madow, gaar ahaan brown iyo madow. Ka feker sida aad u labistaan ​​lahaa socda in xaflad siyaasadeed, iyo in fikrad fiican ee aad siin doonaa sida ay doonayaan in aad eegto.
Taariikhda Aquarius waa ugu aanan caadi dhammaan calaamadaha Burji, si xor ah u la ciyaaro adiga oo eega oo isku day wax ka duwan. Aad timaha buluug ah ama casaan, kibir tout in la dalooliyo suni ama caloosha button, ama xirtaan aad loo warshadeeyo dahabka dhalada soda. Iyagu ma daryeeli ku saabsan xaaladaha hadda ee, oo kaliya kuwa mustaqbalka, sidaa darteed ma leh waxa in hadda tagaan.
Taariikhda Pisces waa dambaysta ah ee ka taataabtay, sidaa darteed haddii aad aragtay kooxda ah jaldiga ee sheeko jacayl aad ah ama filim ka taataabtay, waxaa shaqayn karaan. Waxay jecel yihiin ruffles, gogo 'la socodka iyo dhaqdhaqaaqa, shalash, iyo haddii aad adigu, xitaa ka fiican. Waxay wax kama qaba hayo caadi ah inkastoo, iyo jiinis iyo maaliyada fiican ku filan ayaa laga yaabaa. Midabkeedu, waxay jecel yihiin pastels.
Top 4 Talooyin in aad ka ogaato Dating
15 Best Twitter Accounts in Raac Talada Dating in 2015